Ihe nkiri Park Studio ga-emeghe na 2021! - Thrilltalk.com
Home/Nieuws/Ihe nkiri Park Studio ga-emeghe na 2021!
Ihe nkiri Park Studio ga-emeghe na 2021!
0 14 Ejiri 2 gụọ
Ihe nkiri Park Germany na-apụta si na-acha uhie uhie kapeeti maka kasị ukwuu Hollywood njem na ogige akụkọ ihe mere eme! Ihe ngosi ọhụrụ na-eme emume ncheta nke 25 nke ogige ahụ na-eme ka ezinụlọ ahụ dum gaa njem nlegharị anya na-atọ ụtọ nke Hollywood nwere usoro dị iche iche na ihe ngosi na ihe nkiri iji zọọ
Ngwakọta nke ala na-agba ọsọ na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị abụghị naanị na-enye ndị ọbịa ọsọ ọsọ ma na-etinye aka dị ka na blockbuster, kamakwa na-ebuga ha ozugbo n'ime ụwa nke ihe nkiri na akụkọ Hollywood iji kwekọọ iji mee ka ha bụrụ kpakpando maka ụbọchị ahụ. Nabata na Ihe nkiri Park Studio'ga-abụ motto maka oge opupu ihe ubi nke 2021 na fim kachasị ukwuu na ogige ntụrụndụ nke Germany mgbe ihe mkpuchi ọhụụ ọhụrụ meghere ọnụ ụzọ ámá ya n'ihu ọha.
Park Park na ụlọ ọrụ Dutch na-arụkọ ọrụ
N’ezie, ọ bụ naanị ndị na-eme ihe nkiri na ndị isi na-eme ka ezigbo ụlọ ahịa dị ndụ. Ya mere ọ na-arụ ọrụ Ihe nkiri Park Germany ya na ndi okacha amara nke ndi ozo ichota njem ohuru.
Ndị isi okike nke IMAscore na IMAmotion, ndị Leisure Expert Group (Dutch), Wiebe Damstra (Dutch, nke a na-akpọ Untamed) na ndị mmekọ ama ama P&P Projects (Dutch), ndị rụburu ọrụ maka Universal na Disney, na-edu ndú na mmezu nke ọhụrụ Otutu Coaster nke INTAMIN.
Maka ogbugbu nke nnukwu oru ngo a buru ibu, ndi otu ihe nkiri Movie Park gara nke mbu Hollywood Studios na California iji hụ na ezigbo isiokwu.
Akụkọ site na Movie Park Studios
Emegharịala kapeeti na-acha uhie uhie, ọkụ ihu dị ebe: nabata na Ihe nkiri Park Studio! Tupu ndị ọbịa ahụta ụbọchị pụrụ iche na Hollywood, Germany, ha gafere n'ọnụ ụzọ ámá nnukwute ụlọ, nke dabere na ụlọ nka ama ama nke Los Angeles na ọ ga-abụ akara ọhụụ ọhụụ nke mpaghara ahịrị.
Na mgbakwunye na ebe echere echepụtara nke ọma, ndị nkiri niile na ihe nkiri ntụrụndụ nwere ike ịtụ anya maka ihe ngosi ga-adaba na-eduga ha na kpakpando na kpakpando.
Ma ugbu a bụ oge maka ime ihe! N'oge njem nlegharị anya dị egwu, ndị ọbịa na-emikpu onwe ha na anya dị n'azụ ma banye n'ime usoro dị iche iche nke imepụta ihe nkiri.
Site na ihe nkiri ihe nkiri na ngalaba mmetụta pụrụ iche na ngalaba ụda, ihe ọhụrụ ahụ na-akpọrọ ha site na mkpokọta ọnọdụ 12 dị iche iche, na-echetara ihe nkiri nkiri ndị a ma ama. N'ikwekọ n'ụdị ụlọ Hollywood na-egbu maramara nke Hollywood, a na-ewu ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ n'ime ụdị Art Deco dị mkpa. A na-ewepụta akara ngosi njem ọhụụ maka ihe nkiri ahụ.
“Ọhụrụ Otutu Coaster anyị chọrọ ika 'Ihe nkiri Park Germany'na-ewusiwanye ike ma na-edozi onwe anyị ọbụna karị dị ka ogige nwere ihe nkiri,' ka ọ na-ekwu Manuel Prossotowicz, Onye njikwa ọrụ na Director Brand Development.
N'otu oge ahụ, anyị na-akpọghachi ndị ọbịa anyị n'oge gara aga nke ogige ahụ kwa ụbọchị Ihe nkiri Park Studio ihe omuma kariri. Ọbịa ndị na-anọbeghị ogologo oge nwere ike ile anya ọtụtụ akwa Ista ị nwere ike ịchọpụta ”.
Ihe nke ochie na-agba ịnyịnya dị ka nke mbụ "Gremlins Mwakpo" na-agba ịnyịnya, "Cop Car Chase" coaster na "Ihe nkiri Ime AnwansiA ga-agwakọta ya ma mekwaa ya na njem nlegharị ebe ọhụụ ọhụrụ.
Maka njem ọhụrụ ahụ, ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ izizi mbụ na ogige Movie Park, ebe a na-emepụta ihe nkiri, na nchịkọta nke ochie nke ọtụtụ ihe ngosi ogige anakọtara ma zukọta. Ọzọkwa, enwere ọhụụ ọhụụ maka ezinụlọ dum. Ọmụmaatụ, ọhụrụ odide, e mere maka a dum na-ege ntị, ga-eso ma ẹnyene ndị ọbịa n'oge ha njem na Ihe nkiri Park Studio.
Cop Car Chare Gremlins Hollywood ime ụlọ Manuel Prossotowicz Ihe nkiri Ime Anwansi Ihe nkiri Park Studio ogige ntụrụndụ Fans nyocha
Youkwesịrị iyi mkpuchi ihu na ogige ntụrụndụ site na echi?
Dolfinarium Harderwijk na-enye ego dị ukwuu na tiketi n'oge Black Friday
N'afọ a, ọ dịghị ice n'obí ke ini etuep Efteling
Ihe owuwu ohuru ohuru ohuru Movie Park Germany
Na ego na "Harry Potter Studios ™ London"